यदि तपाईकाे पनि कपाल झर्ने समस्या छ भने भुलेर पनि नगर्नुहोस् यी ७ काम - fairnepal.net
यदि तपाईकाे पनि कपाल झर्ने समस्या छ भने भुलेर पनि नगर्नुहोस् यी ७ काम
FN November 25, 2021	No Comments
आजकल कपाल झर्ने समस्याले सबैलाई चिन्तित बनाएको छ । कपाल झर्ने बित्तिकै अधिकांश मानिसले तेल र स्याम्पु पनि फेर्छन् ।
यसो गरे पनि यदि तपाई आफ्नो समस्याबाट मुक्त हुनुहुन्न भने केहि सजिलो उपाय अपनाएर तपाई कपाल झर्ने समस्याबाट मुक्त हुन सक्नुहुन्छ । आउनुहोस् जानौं ती टिप्सका बारेमा….
– सौन्दर्य विज्ञहरूका अनुसार, धेरै पटक यस्तो देखिएको छ कि मानिसहरूले स्याम्पु गरेपछि तुरुन्तै आफ्नो कपाललाई कोर्न थाल्छन् । यसो गर्नु ठिक होइन । किनकि भिजेको कपालको जरा कमजोर रहन्छ र कपाल बढी फुट्छ । कपाललाई राम्ररी सुकाउनुहोस्। त्यसपछि मात्र कोर्नुस् ।
– यदि तपाईको कपाल धेरै झरेको छ भने माइल्ड स्याम्पु मात्र प्रयोग गर्नुहोस् । यसका अलावा खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । र आफ्नो आहारमा अधिक र अधिक प्रोटीन समावेश गर्नुहोस्। जस्तै दाल, अण्डा, दूध र दुधजन्य पदार्थ आदि ।
– रङ प्रयोग गर्ने हो भने महिनामा एक पटकभन्दा बढी रंग नहोस् भन्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । यदि सम्भव छ भने, एक पटक रङ गरेपछि, २ देखि ३ महिनाको अन्तराल राख्नुहोस् । लगातार रङ लगाउनाले कपाल कमजोर बन्न सक्छ र कपाल झर्ने समस्या बढ्छ त्यसैले यसो नगर्नुहोस् ।
– यदि कपाल धेरै झरिरहेको छ भने, धेरै तेल लगाउनबाट बच्नुहोस् । धेरै पटक धेरै तेलको कारण कपालको जरा कमजोर हुन्छ र यसका कारण कपाल झन् टुट्न थाल्छ। त्यसैले यसो गर्नबाट जोगिनुस् ।
– विज्ञहरुका अनुसार सलुनमा कलरिङ गराउने मानिसहरुले यसको साथमा स्ट्रेटनिङ ट्रिटमेन्ट समेत गर्ने गरेको देखिन्छ । कपाल स्ट्रेट गर्ने ट्रिटमेन्ट कम्तिमा चार हप्ताको अन्तर राख्नुहोस् । साथै, आहारमा भिटामिन युक्त चीजहरू समावेश गर्नुहोस्, जस्तै अण्डाको सेतो भाग, केरा, अंकुरित र हरियो तरकारीहरू ।
– यदि तपाइँ लामो समयसम्म एन्टी-ड्यान्ड्रफ शैम्पू प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, यसले तपाइँको कपालको जरा कमजोर र टाउकोलाई चिल्लो बनाउन सक्छ । जसका कारण उक्त स्थानमा कपाल फेरि बढ्न सक्दैन । डन्डीफोरको समस्या छ भने महिनामा एकपटक मात्रै एन्टी-ड्यान्ड्रफ स्याम्पु प्रयोग गर्नुहोस् ।
खाना खाने बित्तिकै भुलेर पनि नगर्नुस् यस्ता काम, नत्र…
सधै धनको अभाव गराउँछ मानिसका यी ५ गलत बानीले, कतै…
भारतमा गलत कपाल काटिदिने सैलुनलाई तीन करोड २० लाख जरिवाना
कपाल छोटो पारिदिएका कारण सैलुनलाई तीन करोड २० लाख…
फ्रिजमा के राख्‍न हुन्छ के हुँदैन ? सावधान भुलेर पनि…
सावधान ! यस्ता रोग लागेका व्यक्तिले भुलेर पनि खानु…
Previous Previous post: उडिरहेको हवाइजहाजमा मोबाइल फोन किन बन्द गर्नुपर्छ ? ‘फ्लाइट माेड’ किन महत्त्वपूर्ण छ, जान्नुहोस्
Next Next post: एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन समारोह शुरू (लाइभ)